Ihe ị ga-ahụ na Amsterdam na ụbọchị 3 | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Amsterdam na ụbọchị 3
Mariela Carril | | Amsterdam, Ihe ị ga-ahụ
Amsterdam Ọ bụ isi obodo Holland, ebe na-etinye uche ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ị ga-ahụ ma mee, ka emechara ya enweghị ihe ọzọ ma ọ nweghị ihe na-erughị narị afọ iri na asaa nke ịdị adị. Ọ bụ obodo a ma ama maka ọwa mmiri ya, ịnyịnya ígwè ya, Ogwe ya na ụlọ mmanya ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie ya na, n'ezie, Mpaghara Red Light.
Mana ọ na-enyekwa gastronomy bara ụba, ọtụtụ biya, ebe obibi maka ihe niile masịrị ya na obere akpa yana, dabere na oge nke afọ, ọtụtụ mmemme ọdịbendị. Mana taa ka anyị hụ kedu ihe anyị ga - eme na ụbọchị atọ na Amsterdam.
Amsterdam na ụbọchị atọ
Bọchị atọ na-abụkarị oge mmadụ nọrọ n’obodo na-abịa na nke mbụ ya na njem ukwu. Ọtụtụ ihe mgbe ọ bịara ileta Europe, ma ọ bụrụ na ị si America, na atụmatụ gị bụ ịga leta ọtụtụ obodo na iri na ise ma ọ bụ ụbọchị iri abụọ.
Yabụ, anyị na-amalite na ụbọchị 1. E nwere ezigbo akwụkwọ ozi sitere na Amsterdam nke metụtara ụlọ dị ogologo, dị warara, nwee ọtụtụ ụlọ nwere ike ịdị glọ gingerbread ha lee Danmark. Ihe a na - emebu bụ ịkwụsị n’ihu, n’elu ube ahụ ma were foto dị mma, ma ị nwere ike ihu ha n’ụgbọ njem ọ bụla. Theselọ ndị a nwere pole n’elu ụlọ n’ihi na ọ bụ otú ahụ ka e si bulie arịa ụlọ, jiri eriri na ọbụna windo. Enwere ọtụtụ obere ụlọ ndị a mara mma na Nieuwebrugsteeg.
Maka otu ezi echiche nke obodo ị ga-ịrị, ya mere na ị nwere ike ịrị elu nke Chọọchị ochie nke dị nso na Red Light District na nke ị nwere nnukwu ilele obodo ochie. Churchlọ ụka ahụ dị na ụdị ndị Gothic ma si na 1213 ọ bụ ụlọ kacha ochie na obodo. Ntinye bụ n'efu ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị ego ndị njem nleta, iAmsterdam City Card. Ma ọ bụghị ya, a na-akwụ ụgwọ 10 euro. Mepee ụbọchị izu site na 10 ruo 6 elekere.
Uzo ozo di nma nke ozo sitere na Cafe Blue Amsterdam, ruru site na ụlọ ahịa ahịa Kalvertoren. Ọ dị n’ala nke atọ, zoro ezo, ma nwee menu dị mfe nke sandwiches na burgers.
Ebe ọ bụ na ị nọ n'ógbè ahụ, ị ​​ga-agagharị n'okporo ámá ochie ndị a ma chọpụta square square. Nke a bụ ebe Churchlọ Nzukọ Ọhụrụ, Ncheta Mba na Royal Obí.E nwekwara Amelọ ihe ngosi nka Madame Tussauds na ụlọ ahịa okomoko De Bijenkorf. Isi n'okporo ámá ịzụ ahịa, Kalverstraat na Nieuwendijk, jikọtara site na obi obodo ahụ wee mee njem ịzụ ahịa mara mma. Na Thursday, iji gosi, ụlọ ahịa na obodo na-emechi mgbe e mesịrị, mgbe ọ na-emebu 6 mgbede.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịga ije ma chọọ izu ike n'èzí ị nwere ike iji uru wee gaa Ogige Begijnhof. O sitere na etiti etiti ma dị nso na Spui square, n'aka nke ya na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa. Ubi ahụ dịpụrụ adịpụ ma nwee ụlọ ndị mmadụ, bụ́ ndị e wuru iji debe ụmụ nwanyị ndị ji okpukpe kpọrọ ihe. Ya mere nleta ahụ kwesịrị ịdị jụụ ma kwanyere ugwu.
El Ifuru ifuru Ọ bụ ebe a ma ama na Amsterdam, ebe kachasị mma iji were foto nke tulips, dịka ọmụmaatụ, mana ị ga-amararịrị na ọ baghị uru ịnọ ogologo oge. Kwesịrị, na-a uzo wee gaba kwupụta Nnukwu Tower, saịtị ebe a na-emebu mkpụrụ ego. Okụri bibiri ya na Middle Ages ma wughachi ya. Ọ bụghị n'ebe dị anya Ogige Rembrandt, nke ị ga-aga ije na Reguliersbreestraat.
Are ga-agabiga nnukwu ụlọ ihe nkiri sinima, Chlọ ihe nkiri Tuschinski, ruo mgbe ha ruru square. Nke a bụ ihe oyiyi dabere na ọrụ nke onye na-ese ihe, The Night Watchman, na ọtụtụ ụlọ ahịa na obere ụlọ ahịa. N’oge a, ọ dị gị ka inye ihe ụgbọ mmiri na-agba ịnyịnya site na canals? N'agbanyeghị oge ọ bụla n'afọ, enwere ije na ọtụtụ onyinye. Ebe i nwere ike iri uru nke iAmsterdam Card, ma n'ihi na ibu ụgbọ mmiri agafe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ihe chiri anya karị, obere ụgbọ mmiri ga-adịrị gị mma nke anaghị enwe ego na kaadị.
Daybọchị 2 na Amsterdam. Firstbọchị mbụ siri ike, amaara m, mana na obodo ahụ abụghị nnukwu na ọchịchọ ịmara ọtụtụ, enwere ike. N'ụbọchị nke abụọ ọ bara uru gbazite igwe kwụ otu ebe na ị ghaghị ịdị gara gara n'ihi na enwere ọtụtụ okporo ụzọ. Iwu dị mkpa bụ ịgbasa n'aka nri ma jiri aka dọọ aka na ntị nke ụzọ anyị ga-aga mgbe anyị na-atụgharị. Site igwe kwụ otu ebe i nwere ike iru ọzọ na-ewu ewu ahịa, na Albert Cuypstraat Ahịa, na-ewu ewu na ndị Amsterdam onwe ha.
Mana enwere ihe niile, nri, ihe ncheta na ụdị nri dị iche iche. Ezigbo nri bụ Goudsche Stroowafels, waffle dị mkpa na caramel. Kasị njọ na e nwere ihe ọzọ. ọzọ na igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịga Museumplein, ebe ngosi nka oge gboo. Ọ bụrụ na ọ masịrị ha, n'ezie, enwere Van Gogh Museum na Rijksmuseum. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, abụọ a bụ ndị a kacha leta ma na-ewu ewu. Kpachara anya, nleta ahụ kwesịrị ikpebi tupu oge eruo n'ihi na enwere ọtụtụ mmadụ. Ọ bụ ụzọ ọzọ iji rite uru na Kaadị iAmsterdam.
Vondelpark ọ bụ ogige kasị ibu na obodo ma dị n’etiti ya. Ga-agagharị na ebe a, ị nwere ike ime ya site na igwe kwụ otu ebe n'ihi na enwere ohere. Yabụ ọ bụrụ na ị zụrụ nri na ahịa ma ị banyeghị n’ebe ndebe ihe mgbe ochie, ị nwere ike ịkwụsị nri ehihie. Eleghi anya ị naghị enwe mmasị na ebe ngosi ihe mgbe ochie mana ị na-achọ ịnyịnya? Mgbe ahụ, na-a ije gburugburu Equlọ Akwụkwọ Holland Equestrian na Museum.
Ọ bụ ụlọ akwụkwọ ochie nke mepere emepe na nke ị nwere ike were klaasị ma ọ bụ jee ije ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ na ngosipụta nke ndị na-agba ịnyịnya mgbe ha na-a enjoyingụ tii na achicha. Na ọrụ tii, dum ahụmahụ, na-efu banyere 25 euro kwa onye ma ị kwesịrị ị na akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na ebe a ma agụụ ka na-agụ gị ma ọ bụ n'ehihie abịawo ma ọ bụ oge iji bulie calorie ọzọ, nhọrọ bụ Halllọ oriri na ọụ Foodụ, nnukwu oghere dị na Bellamyplein n'okporo ámá ma na-enye nri sitere n'akụkụ ụwa niile.
Anyị nwere ike ịrahụ na ya Oud - Agbata obi West nke bụ ebe ndị obodo na-anọkarị. N'ezie, ihi ụra n'oge na ọ ka nwere otu ụbọchị fọdụrụ. Na ụbọchị 3 na Amsterdam Ọ kwesịrị ịmalite n'oge mana ihe ị ga-adabere na mgbe ị kwesịrị ịpụ. N'ụbọchị ikpeazụ, anaghị m eme ọtụtụ ihe, ikekwe karịa ihe ọ bụla iji zuru ike, laghachi ebe ụfọdụ masịrị m, jee ije karịa ...
Ebe na-anọgide na pipeline: the zoo, NEMO Science Museum, Hermitage Museum alaka, Heineken Ahụmahụ ma ọ bụ, dịtụ ntakịrị, ebe omume biya na-arụ ọrụ n'okpuru nnukwu ụlọ ochie na Funenkade. Ga - ahụ etu esi esi a beerụ biya, mara na igwe igwe na 3th na uto. Tiketi ga-zụrụ n'otu ụbọchị (Friday, Saturday na Sunday na 30pm). Ọ bụrụ na i nwere mmasị, ị ga-eme ọsọ ọsọ n'ihi na naanị otu anaghị agafe mmadụ iri abụọ na-abanye.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịhapụ Amsterdam n'abalị ị nwere ike iji uru na jiri ụgbọ mmiri gafee n'akụkụ nke ọzọ nke obodo na-enwe nri ehihie na Ebe Panoramic A'DAM. Rygbọ mmiri ahụ na-ahapụ nkeji iri ọ bụla site na ọdụ ọdụ. Na voila, ụbọchị atọ gị na Amsterdam agafeela. Purchasezụta kaadị ndị njem bụ mgbe niile nhọrọ ga-adabere na ole ebe ụfọdụ ị ga-aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Amsterdam » Ihe ị ga-ahụ na Amsterdam na ụbọchị 3
Ebe nkiri Museum na Berlin
Ihe ị ga-ahụ na Sri Lanka